Fepetra ny Air Compressor Air Oil Separator - Airpull (Shanghai) Sivanina Co., Ltd
1. Raiso ny Compressed Air Quality ho tantara ao amin'ny toe-javatra ara-dalàna, ny Compressed rivotra azo avy amin'ny rivotra compressor ahitana nisy habetsaky ny rano sy ny menaka lubricating, na izay tsy azo atao amin'ny fotoana sasany. Amin'ny toe-javatra ity, nefa tsy manao dia mila mifidy ny tsara rivotra compressor, fa koa tsy maintsy hanampy lahatsoratra sasany fitaovana fitsaboana.
2. Fanteno ny tsy lubricated compressor izay afaka mamokatra ny Compressed rivotra ihany no afaka amin'ny diloilo. Rehefa nanampy tamin'ny voalohany, na faharoa hanadio na ny fanamainana, ny rivotra compressor afaka manao ny Compressed rivotra tsy misy menaka na ny rano afa-po.
3. Ny ambaratongam-paharitry sy ny fitomboan'ny miovaova araka ny mpanjifa takina. Amin'ny ankapobeny, ny fanahafana mba dia: rivotra compressor + rivotra tanky fitehirizana + FC centrifugal-menaka ny rano Separator + refrigerated fanamainana rivotra + FT sivana + FA bitika menaka + zavona sivana (hisakana ny fiasan'ireny maina kokoa + FT + FH nampahavitrihana carbone sivana.)
4. Ny rivotra tanky fitehirizana ny tsindry an'ny sambo. Tokony ho fitaovana amin'ny fiarovana miditra tsimoramora, tsindry Gage, sy ny fiarovana Accessories. Rehefa marary mitsika vola ny rivotra avy 2m³ / min mba 4m³ / min, mampiasa ny 1,000L rivotra fitehirizana tanky. Fa ny vola miainga amin'ny 6m³ / min to10m³ / min, mifidy ny fiara miaraka amin'ny horonam-1,500L ho 2,000L.